Inqubomgomo yobumfihlo - JPEG.to
Ngezansi ukuhumusha okunzima kwemigomo yethu yesevisi yesingisi nenqubomgomo yobumfihlo yesiNgisi yezici zomthetho zombili zisebenza ngesiNgisi kuphela
Ubumfihlo bakho bubalulekile kithi. Kuyinqubomgomo yeJPEG.to ukuhlonipha ubumfihlo bakho maqondana nanoma yiluphi ulwazi esingaluqoqa kuwe kuwebhusayithi yethu yonke, i- https : //jpeg.to, nakwamanye amasayithi esinawo futhi esisebenza kuwo.
Sicela imininingwane yakho kuphela lapho siyidinga ngempela ukukunikeza insizakalo. Siluqoqa ngezindlela ezingenzeleli nezisemthethweni, ngolwazi nemvume yakho. Futhi sikwazisa ukuthi kungani siyiqoqa nokuthi izosetshenziswa kanjani.
Sigcina kuphela imininingwane eqoqiwe inqobo nje uma kudingeka ukukunikeza ngensizakalo oyicelile. Imiphi idatha esiyigcinayo, sizoyivikela ngezindlela ezamukelekayo ezentengiselwano ukuvimbela ukulahleka nokweba, kanye nokufinyelela okungagunyaziwe, ukuvezwa, ukukopisha, ukusetshenziswa noma ukuguqulwa.
Asabelani nganoma yiluphi ulwazi olukhomba mathupha esidlangalaleni noma nabantu besithathu, ngaphandle kwalapho kudingeka ngokomthetho.
Iwebhusayithi yethu ingaxhuma kumasayithi angaphandle angasetshenziswanga yithi. Sicela wazi ukuthi asinakulawula okuqukethwe kanye nokwenziwa kwalawa masayithi, futhi asikwazi ukwamukela umthwalo noma isibopho sezinqubomgomo zabo zobumfihlo.
Ukhululekile ukwenqaba isicelo sethu semininingwane yakho, ngokuqonda ukuthi kungenzeka singakwazi ukukunikeza ngeminye yemisebenzi oyifunayo.
Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa iwebhusayithi yethu kuzothathwa njengokwamukela imikhuba yethu mayelana nobumfihlo nolwazi lomuntu siqu. Uma unemibuzo mayelana nokuthi siyiphatha kanjani imininingwane yomsebenzisi nolwazi lomuntu siqu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Le nqubomgomo iyasebenza kusukela ngomhlaka 6 Juni 2019.
Amafayela alayishiwe ayasuswa ngemuva kwamahora amabili futhi amafayela aguquliwe ayasuswa ngemuva kwamahora angama-24. Ukuze sinciphise ukuhlukunyezwa, sifaka ikheli le-IP eliguqukile lapho ifayela liguqulwa, abukho ubudlelwano namafayela nekheli le-IP. Ngemuva kwehora elilodwa ikheli le-IP liyasuswa ngakho-ke kumahhala ukwenza okunye ukuguqulwa.
Guqula kusuka kuJPEG
JPEG kuya eZwini
I-JPEG kuya ku-PNG
JPG to IZwi
I-JPG iye ku-JFIF
I-JPG eya ku-DOC
JPG kuya ku-DOCX
I-JPG iye kwiWebP
JPEG kuya ku-DOC
I-JPEG kuya ku-DOCX
I-JPEG kuya ku-TIFF
I-JPG iye ku-TIFF
I-JPG iye ku-PSD
I-PNG kuya kuJPEG
I-ICO eya kuJPEG
I-BMP eya kuJPEG
I-JFIF iye ku-JPEG
I-PNG kuya kuJPG
I-ICO eya kuJPG
I-JFIF iye ku-JPG
I-DOC eya kuJPEG
I-DOC eya kuJPG
I-DOCX ukuya kuJPEG
I-DOCX ukuya kuJPG
WEBP kuya ku-JPEG
TIFF kuya ku-JPG
TIFF kuya ku-JPEG
I-PSD iye ku-JPG
I-PSD iye ku-JPEG
19,390 ukuguqulwa kusukela ngo-2020!
Yenziwe ngu nadermx - © 2021 JPEG.to
Usudlule umkhawulo wakho wokuguqulwa wamathathu ngehora, ungaguqula amafayela akho abe yi- 59:00 noma Bhalisa futhi uguqule manje.